HARTHANANTAW - Page3of5- Digital World
အဘိုးကြီးက သမီးအရွယ်ကောင်မလေးနဲ့ လူကြားထဲမှာ မဖွယ်မရာပြုလုပ်(ရုပ်သံ)
အဘိုးကြီးက သမီးအရွယ်ကောင်မလေးနဲ့ လူကြားထဲမှာ မဖွယ်မရာပြုလုပ်(ရုပ်သံ) လောကကြီးက ဘာတွေဖြစ်ကုန်တယ်တော့မသိတော့ပါဖူး … နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီးမှာတောင် သမီးအရွယ်မိန်းခလေးငယ်ငယ်လေးကို ထင်ရာတွေလုပ်နေတာ…. အရှက်အကြောက်ဆိုတာလဲ မရှိတော့ပါလား …. ခလေးမလေးမှာလဲ မိဘတေပဲမရှိတော့တာလား
Up to date October 7, 2019 No Comment
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူအသတ်ခံရမှု ရည်းစားဟောင်းတပ်ကြပ်ကြီး အဖြစ်မှန် ထွက်ဆိုပြီ
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူအသတ်ခံရမှု ရည်းစားဟောင်းတပ်ကြပ်ကြီး အဖြစ်မှန် ထွက်ဆိုပြီ ကလေးတက္ကသိုလ်တွင် ရုက္ခဗေဒ(ပထမနှစ်) တက်ရောက်နေသူ မအေးချမ်းမွန်(၁၈) နှစ်ကို သတ်ဖြတ်ပြီး အလောင်းဖျောက်ဖျက်ခဲ့သော ရည်းစားဟောင်း တပ်ကြပ်ကြီးကို ကလေးမြို့မရဲစခန်း၌ (ပ)၂၁၄၅/၂၀၁၉
Up to date October 6, 2019 No Comment
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်း (၆.၁၀.၂၀၁၉ မှ ၁၂.၁၀.၂၀၁၉ ထိ)
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်း (၆.၁၀.၂၀၁၉ မှ ၁၂.၁၀.၂၀၁၉ ထိ) (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်း (၆.၁၀.၂၀၁၉)
Astrology October 6, 2019 No Comment
လူမဆန်​စွာ အဓမ္မပြုကျင့်​ခံရပြီး လည်​လှီးသတ်​ဖြတ်​ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ သမီးငယ်​​လေးဖြစ်​ရပ်​က ဒီလိုပါ …
လူမဆန်​စွာ အဓမ္မပြုကျင့်​ခံရပြီး လည်​လှီးသတ်​ဖြတ်​ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ သမီးငယ်​​လေးဖြစ်​ရပ်​က ဒီလိုပါ … ​နေပြည်​​တော်​ဟစ်​တိုင်​ *စစ်​သည်​​တော်​အဖွဲ့ တနသာင်္ရီတိုင်း​ဒေသကြီး၊ ထားဝယ်​ခရိုင်​၊ သရက်​​ချောင်းမြို့နယ်​ စုံစင်ဖျား​ကျေးရွာတွင်​လူမဆန်းစွာ ရက်​ရက်​ဆက်​ဆက်​ အဓမ္မပြုကျင့်​ပြီး သတ်​ဖြတ်​သွား​ကြောင်းသိရှိရပါတယ်
Local News October 6, 2019 No Comment
ကျောင်းသူလေး၏ အလောင်းကို ဖျောက်သည်ဟု ဝန်ခံထားသူသည် တပ်ပြေးတစ်ဦး ဖြစ်နေ
ကျောင်းသူလေး၏ အလောင်းကို ဖျောက်သည်ဟု ဝန်ခံထားသူသည် တပ်ပြေးတစ်ဦး ဖြစ်နေ ကလေးတက္ကသိုလ်မှ ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူကို သတ်ပြီး အလောင်းဖျောက်သည် ဆိုသော အသက် (၂၀) ကျော်အရွယ် ဈာန်မင်းထက်ဆိုသူကို
ကျောင်းဆင်းချိန် ဆရာက တပည့်တယောက်ချင်းစီကို နှုတ်ဆက်သည့်ရုပ်သံ ရေပန်းစား
ကျောင်းဆင်းချိန် ဆရာက တပည့်တယောက်ချင်းစီကို နှုတ်ဆက်သည့်ရုပ်သံ ရေပန်းစား ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ ဆရာတဦးက တပည့်တွေနဲ့ တယောက်ချင်း နှုတ်ဆက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တခုကို တင်ထားပြီး လူကြိုက်များနေပါတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …
Knowledge October 6, 2019 No Comment
Gym သွားဖို့ အချိန်မရတဲ့သူတွေအတွက် ဝမ်းဗိုက်က အဆီတွေကျစေမယ့် 15 မိနစ်စာ လေ့ကျင့်ခန်းများ
Gym သွားဖို့ အချိန်မရတဲ့သူတွေအတွက် ဝမ်းဗိုက်က အဆီတွေကျစေမယ့် 15 မိနစ်စာ လေ့ကျင့်ခန်းများ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို အလုပ်လုပ်ချိန် 8.06နာရီရှိပါတယ်။ ပိတ်ရက်တွေမှာ 5.53နာရီအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Health October 6, 2019 No Comment
သိပ်မကြာခင်မှာ သွေးစစ်ဆေးမှုကနေ ဘယ်အချိန်သေဆုံးနိုင်မလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်တော့မည်
သိပ်မကြာခင်မှာ သွေးစစ်ဆေးမှုကနေ ဘယ်အချိန်သေဆုံးနိုင်မလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်တော့မည် သွေးစစ်ဆေးမှုအသစ်တစ်ခုကနေ တိကျတဲ့ခန့်မှန်းမှုတွေကို သမာရိုးကျအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မယ့် အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့ BMI တွေ သွေးဖိအားတွေကိုအသုံးပြုပြီးပြုလုပ်ထားမှာပါ .. ။ သင်ဟာနောက်၁၀နှစ်အတွင်း သေဆုံးမှာလား
အသတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသူလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျူးလွန်သူရဲ့ ရည်းစားဆိုသူမှ အကြောင်းစုံဖော်ပြပြီ
အသတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသူလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျူးလွန်သူရဲ့ ရည်းစားဆိုသူမှ အကြောင်းစုံဖော်ပြပြီ လူမှုကွန်ယက်မှာ နားမည်ကြီးပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ သတင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ တက္ကသိုလ်‌စာ‌မေးပွဲ‌နောက်‌ဆုံး‌နေ့မှာ ပျောက်ဆုံးသွားရာမှ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရတဲ့ သတင်းတစ်ခု
အိမ်တွင်းမှာ မထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေ တဲ့ အရာ(၆)မျိုး
အိမ်တွင်းမှာ မထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေ တဲ့ အရာ(၆)မျိုး သင့် အိမ် မှာ အကြောင်းအရာ ထွေထွေထူးထူး မရှိဘဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်လား..? ကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့ကြားက အိမ်